ओलीले अड्काए कुलमानबारेको प्रस्ताव, घिसिङ ‘आउट’ गरेर आफन्त भित्राउने तयारी - Aarthiknews
सोमबार, १२ असोज २०७७ Monday, 28 September, 2020
ओलीले अड्काए कुलमानबारेको प्रस्ताव, घिसिङ ‘आउट’ गरेर आफन्त भित्राउने तयारी
मंगलबार, ३० भदौ २०७७
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङको म्याद नथपिने संकेत देखिएको छ । घिसिङको गत आइतबार ४ वर्षे कार्यकाल पुरा भएको थियो । प्रधिकरणमा कुलमानको म्याद नथप्ने भएपछि प्राधिकरणमा नै कार्यरत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सालो पर्ने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेकपा भित्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती विवाद भएको सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका नेताहरुले राखेका स्टाटसहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । यसविचमा 'बाहिरका केहि मान्छेलाई प्राधिकरणमा ल्याउने योजना भएपनि केहि समयका लागि शाक्यलाई कामु दिएर केहि समय प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने हुनसक्छ' स्रोतले भन्यो ।
प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकका आकांक्षीमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक तथा नेपाल सरकारका सहसचिव नविनकुमार सिंह र पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुशिल ज्ञावली पनि रहेका छन् ।
सोमबार उर्जामन्त्रालयले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो। तर, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सो प्रस्तावबारे छलफल नै नभएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुन नियुक्त गर्नका लागि कानुनी बाधा भएको बताएर प्रस्ताव पन्छाएका थिए ।
प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावलीलाई मन्त्रीपरिषदले नै सामान्य परिवर्तन गरेर मात्रै पनि कुलमानलाई पुन नियुक्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । 'गोकर्ण विष्ट उर्जामन्त्री भएका बेलामा प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्दाबाट गरिने छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रावधानलाई मन्त्रीपरिषदले नै संशोधन गर्न सक्छ' स्रोतले भन्यो । स्रोतको निष्कर्ष छ, 'तर, यसरी कानुनी बाधा देखाएर कुलमानलाई पुन नियुक्ती नदिने प्रपञ्चमात्रै हो।'
प्राधिकरणमा यसभन्दा पहिला किर्तिजंग ठकुरले ६ वर्ष र डा. जनकराज कर्मचार्याले ८ वर्ष नेतृत्व सम्हालेका थिए। 'उनीहरुले पुन नियुक्ती पाएर नै त्यसरी काम गरिसकेको नजिर छ' स्रोतले भन्यो । घिसिङले पनि पुनर्नियुक्तिबारे निर्णय हुन नुसकेपछि बिदाई हुने इच्छा देखाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
नार्क कार्यकारी निर्देशकमा डा.भण्डारी नियुक्त
रेमिट्यान्सको वृद्धि २३ प्रतिशत, विदेश जानेको संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटे
हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अनुमति
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अख्तियारको कारवाहीमा
गोताखोरलाई १० लाखको बीमा गर्ने सरकारको निर्णय
कोरोनाबाट थप ४ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४८१ पुग्यो
उपत्यकामा थपिए ८१७ जना कोरोना संक्रमित
विराटनगरको नोबेलमा पीसीआर टेष्ट शुरु, शुल्क २ हजार
कोरोना मुक्त बन्यो इलाम
भारतका यी प्रदेश जाँदैहुनुहुन्छ: पहिला त्यहाका यी नियम पढ्नुहोस
राष्ट्रपतिद्वारा एसिडसहित तीन अध्यादेश जारी
ओपोद्वारा एफ १७ प्रो सार्वजनिक, मूल्य कति रहेछ ?
कम लाभांश प्रस्ताव गर्दा युनिलिभरको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट
एपहरुले थाहै नदिई तपाईको फेसबुकको सूचना त लिइरहेका छैनन् ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
अनलाइन शेयर कारोबार भएपछि लगानीकर्ता हैरान
मापदण्ड पूरा गरी विद्यालय सञ्चालन
सानिमा बैंकको क्रेडिट कार्ड लिन अनलाईनबाटै आवेदन दिन मिल्ने
नबिल बैंकबाट सस्तो ब्याजमा शेयर लोन पाइने
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो, मेरी उनीलाई मुद्दति खाता योजना
चित्लाङ–थानकोट सडक खुला